SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Tenda munaShe Jesu uye uchaponeswa.”—Mabasa 16:31.
Mashoko iwayo asingakanganwiki akataurwa naPauro naSirasi kumurindi wejeri kuFiripi, guta remuMakedhoniya. Vairevei pavakataura mashoko aya? Kuti tinzwisise kuti kutenda muna Jesu kunobatana papi nekununurwa parufu, tinofanira kutanga taziva kuti sei tichifa. Ona zvinotaurwa neBhaibheri.
Vanhu havana kusikwa kuti vafe
“Jehovha Mwari akabva atora munhu, akamugarisa mumunda weEdheni kuti aurime nokuutarisira. Jehovha Mwari akarayirawo munhu kuti: ‘Ungadya miti yose yomunda kusvikira waguta. Asi usadya muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti nezuva raunoudya chokwadi uchafa.’”—Genesisi 2:15-17.
Mwari akaita kuti munhu wekutanga Adhamu agare mubindu reEdheni pano panyika, iro raiva paradhiso ine mhuka dzakawanda nemiti yakanaka nemaruva. Maiva nemiti yemichero yaikwanisa kudyiwa naAdhamu pamadiro. Asi Jehovha Mwari akanyatsomuudza nezvemuti mumwe chete waaisafanira kudya, ndokumunyevera kuti kana akaudya aizofa.
Adhamu akanzwisisa zvaainge arambidzwa here? Aiziva kuti chii chinonzi rufu nekuti akanga aona mhuka dzichifa. Kudai Adhamu akanga asikwa kuti azofa, zvaisazova nemusoro kuti Mwari amunyevere sezvaakaita. Saka Adhamu aiziva kuti kana akateerera Mwari, akasadya michero yemuti iwoyo, aizorarama nekusingaperi, kureva kuti aisazofa.
Vamwe vanofunga kuti muti uyu waireva kusangana pabonde, asi handizvo. Jehovha akanga atoudza Adhamu nemudzimai wake, Evha, kuti “berekai muwande, muzadze nyika, muikurire.” (Genesisi 1:28) Saka vakarambidzwa muti chaiwo. Jehovha akaudana kuti “muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa” nekuti waimiririra kodzero yake yekuudza vanhu zvakavanakira kana kuti zvakaipa. Kudai Adhamu asina kudya muchero wemuti uyu, zvaizoratidza kuti aiteerera Jehovha uye kuti aitenda Mwari uyo ainge amusika uye amukomborera zvikuru.
Adhamu akafa nekuti haana kuteerera Mwari
“Kuna Adhamu [Mwari] akati: ‘Nokuti . . . wadya muti wandakakurayira nezvawo, . . . uchadya zvokudya zveziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu, nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokera kuguruva.’”—Genesisi 3:17, 19.
Adhamu akadya muchero wemuti waakanga arambidzwa. Iyi yakanga isiri nyaya yekutamba nayo. Kwaitova kupanduka uye kusatenda zvinhu zvose zvakanaka zvaakanga aitirwa naJehovha. Kudya kwakaita Adhamu muchero, kwairatidza kuti ainge aramba Jehovha, achida kuzvimiririra, izvo zvaizoguma nematambudziko.
Sezvakanga zvataurwa naJehovha, Adhamu akazofa. Mwari ainge aumba Adhamu “neguruva revhu” uye ainge amuudza kuti ‘aizodzokera kuvhu.’ Adhamu haana kunorarama kune imwe nzvimbo kana kuti kuva nemumwe muviri. Paakafa, akanga asisina upenyu kungofanana neguruva raakanga asikwa naro.—Genesisi 2:7; Muparidzi 9:5, 10.
Tinofa nekuti takabva kuna Adhamu
“Chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete uye rufu zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vose vakanga vatadza.”—VaRoma 5:12.
Kusateerera kwaAdhamu kuchiri kuita kuti titambure nanhasi. Paakatadza, Adhamu akarasikirwa netariro yekurarama nekusingaperi, kwete makore 70 kana 80 chete atinorarama mazuva ano. Akabva ava nechivi uye vana vake vose vaizovawo nacho.
Tose takabva kuna Adhamu. Tine chivi chakabva kwaari, uye hapana zvataikwanisa kuita kuti tirege kuva nechivi ichi icho chinoguma nerufu. Pauro akanyatsotsanangura dambudziko ratiinaro. Akanyora kuti: “Ndiri wenyama, ndakatengeswa kuti ndive muranda wechivi. Ndiri munhu wenhamo! Ndiani achandinunura mumuviri uri kuwana rufu urwu?” Pauro anobva azvipindura achiti: “Mwari ngaaongwe nokuna Jesu Kristu Ishe wedu!”—VaRoma 7:14, 24, 25.
Jesu akatifira kuti tikwanise kurarama nekusingaperi
“Baba vakatuma Mwanakomana wavo kuti ave Muponesi wenyika.”—1 Johani 4:14.
Jehovha Mwari akaita urongwa hwekuti abvise zvose zvakakonzerwa nechivi uye atinunure pakufa zvachose. Akazviita sei? Akatuma Mwanakomana wake waanoda kubva kudenga kuti aberekwe semunhu asina chivi kufanana nezvainge zvakaita Adhamu. Asi Jesu akasiyana naAdhamu pakuti iye “haana kuita chivi.” (1 Petro 2:22) Sezvo akanga asina chivi, aisazofa pamusana pemutongo wakapiwa Adhamu uye aigona kurarama nekusingaperi.
Asi Jehovha akabvumira kuti Jesu aurayiwe nevavengi vake. Pashure pemazuva matatu, Jehovha akamumutsa ava nemuviri wengirozi kuti azokwanisa kudzokera kudenga. Ava ikoko, Jesu akapedzisa kubhadhara rudzikinuro kuna Mwari kuti asunungure vanhu pachivi nerufu zvakakonzerwa naAdhamu. Jehovha akagamuchira chibayiro ichocho, izvo zvinoita kuti vose vanotenda muna Jesu vawane upenyu husingaperi.—VaRoma 3:23, 24; 1 Johani 2:2.
Saka Jesu akaita kuti vanhu vawanezve upenyu hwaimbova naAdhamu. Akafa kuti isu tive netariro yekurarama nekusingaperi. Bhaibheri rinoti: “Jesu . . . akafa, kuti nomutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari aravire rufu nokuda kwevanhu vose.”—VaHebheru 2:9.
Izvi zvinotidzidzisa chimwe chinhu nezvaJehovha. Kutonga kwake kwakarurama kwaisazoita kuti vanhu vane chivi vakwanise kuzvisunungura. Zvisinei, rudo rwake nengoni zvakaita kuti aite zvinoenderana nekutonga kwake kwakarurama. Akarasikirwa zvikuru paakapa Mwanakomana wake kuti atisunungure.—VaRoma 5:6-8.
Jesu akafa akamutswa, uye vamwe vachamutswawo
“Kristu akamutswa kuvakafa, icho chibereko chokutanga pane vaya vakarara murufu. Nokuti rufu zvaruripo nokuda kwomunhu, kumuka kweva- kafa kuripowo nokuda kwomunhu. Nokuti vose zvavari kufa muna Adhamu, saizvozvowo vose vachaitwa vapenyu muna Kristu.”—1 VaKorinde 15:20-22.
Tinozviziva kuti Jesu akamborarama uye akazofa, asi pane here uchapupu hunoratidza kuti paakafa akamutswa? Humwe uchapupu hwakasimba ndehwekuti Jesu paakamutswa akazviratidza kuvanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana, panguva dzakasiyana-siyana. Pane imwe nguva akazviratidza kuvanhu vanopfuura 500. Muapostora Pauro akanyora nezvazvo mutsamba yake kuvaKorinde, achiti paiva nevamwe vakamuona vainge vachiri vapenyu, zvichiratidza kuti vaiva zvapupu zvaigona kutaura zvazvakaona nezvazvakanzwa.—1 VaKorinde 15:3-8.
Uye chimwe chatinofanira kuziva ndechekuti Pauro paakanyora kuti Kristu aiva “chibereko chokutanga” chevaya vakamutswa, airatidza kuti pane vamwe vaizomutswa. Jesu pachake akataura kuti nguva ichasvika apo “vose vari mumakuva vachayeukwa” uye “vobuda.”—Johani 5:28, 29.
Kuti tirarame nekusingaperi tinofanira kutenda muna Jesu
Kwekutanga kweBhaibheri kunotiudza nezvekutanga kwakaita rufu uye kurasikirwa kwatakaitwa neParadhiso. Kwekupedzisira kwaro kunotiudza nezvenguva ichapera rufu, Mwari achiitazve kuti pasi rose rive Paradhiso. Vanhu vachava neupenyu hwakanaka vachifara nekusingaperi. Zvakazarurwa 21:4 inoti: “Rufu haruchazovipo.” Ndima 5 inoratidza kuti zvinhu izvi zvichaitika painoti: “Mashoko aya akatendeka uye ndeechokwadi.” Jehovha anozadzisa zvose zvaanenge avimbisa.
Unobvuma here kuti “mashoko aya akatendeka uye ndeechokwadi”? Kana uchibvuma, dzidza zvakawanda nezvaJesu Kristu, uye tenda maari. Kana ukadaro uchafarirwa naJehovha. Achakukomborera zvikuru iye zvino uye uchava netariro yekurarama nekusingaperi muParadhiso pasi pano, pasisina rufu, “kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa.”